विवाह स्थलमा पहिलो श्रीमती एकाएक देखिइन्, बेहुलाले भेटे रामधुलाई – Nepalakhabar
विवाह स्थलमा पहिलो श्रीमती एकाएक देखिइन्, बेहुलाले भेटे रामधुलाई
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:३९
नेपाल अखबार, एजेन्सि। एक बेहुला आफ्नै विवाह मण्डपबाट लखेटिएका छन् । बेहुलाकी जेठी श्रीमतीले नयाँ बेहुलीलाई उनका बेहुलाको पहिले नै एकजना होइन, दुईजनासँग विवाह भइसकेको जानकारी दिन विवाह स्थल आएपछि उनी लखेटिएका हुन् ।
भीडबाट बच्नका लागि बस मुनी लुकेका बेहुलालाई पछि अपरिचित व्यक्तिले बचाएका छन् ।
पाकिस्तानमा बहुविवाह वैध छ ।
एक व्यक्तिले चारजना श्रीमती राख्न पाउँछन् तर यसका लागि उनले श्रीमतीहरुको अनुमती लिनुपर्छ ।
घटनाको भिडियो पनि सोसल मिडियामा सार्वजनिक भएको छ ।
भिडियोमा देखिए अनुसार विवाह स्थलमा एकाएक एक रिसाएकी महिला प्रवेश भएपछि एक व्यक्तिले प्रश्न गर्छन्, ‘बहिनी के भयो ?’
मदिहा सिद्दीकी नामकी ती महिलाले कुराको चुरो समात्न बेर लगाइनन् ।
त्यसपछि उनलाई केही पर राखेर कुराकानी गरियो । त्यसपछि उनले नयाँ बेहुलीसँग पनि कुरा गरिन् ।
‘तिमीलाई थाहा थिएन ? उनी मेरा श्रीमान् हुन् ? उनले यो अबोध बालकको पनि ख्याल गरेनन् ।’
सुरुमा आफूले दोस्रो विवाह गरेको अस्विकार गरेपनि पछि श्रीमानले उक्त कुरा स्विकार गरेको मदिहाले जानकारी दिइन् ।
जेहराले नै उनलाई श्रीमानले तेस्रो विवाह गर्न लागेको भन्ने जानकारी दिएको उनले बताइन् ।
त्यसपछि के भयो जानकारीमा उल्लेख नभएपछि घटनास्थलमा बोलाइएका प्रहरीले बेहुलीका आफन्तले बेहुलाको रामधुलाई गरेको जानकारी दिए ।
Previous इराकमा अमेरिकी सेनाको बेसमा रकेट हमला
Next अमेरिकी राष्ट्रपतिको नजरबाट सिङ्गो बस्तीलाई लुकाउने प्रयास, ७ फिट अग्लो पर्खाल बनाइँदै
१४ फाल्गुन २०७६, बुधबार १६:५०
उत्तर कोरियाले आयात सामाग्रीमा पनि कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्ने
१४ फाल्गुन २०७६, बुधबार १५:४२
चीनमा नजरबन्दमा रहेकी उइगर मुस्लिम महिलाको सन्देश ट्वीटरमा सार्वजनिक
१४ फाल्गुन २०७६, बुधबार १५:३३